Gedoonline | Archive | Arrimaha Bulshada
Home » Archives by category » World » Arrimaha Bulshada
Nolosha Haweenka Ka Shaqeeya Shaqada Dhar Dhaqista
Muqdisho(GMN)-Magaaladda Muqdisho waxaa ka xamaasha haween aad u fara badan kuwaa soo noloshooda ku dibira shaqooyin kala duwan. Haweenka qaar ayaa ku kalaha inay ka shaqaystaan Guryaha nolol ahaan ladan si ay Qoyskooda maalintaas ugu helaan wax ay cunaan. Dhibaatooyin kala duwan ayaa haweenka qaar waxa ay kala kulmaan shaqooyinka ay hayaan. Jirdil oo ay [...]
Shabaab Oo Hawlgal Baaritaan ah Ka Sameyey Baardheere
Baardheere(GMN)-Wararka laga helayo Degmadda Baardheere ee Gobbolka Gedo ayaa sheegaya in halkaasi Shabaab ay sameyeen hawlgal baaritaan ah. Dadka Deegaanka ayaa sheegay in hawlgalka Shabaab ay ku baadi goobayeen dad ay ku tuhmayaan in Dowladda ay ka tirsan yihiin oo ay sheegeen in degmadda ay soo galeen. Askarta Shabaab ayaa tan iyo xalay waxa ay [...]
TACSI: MARXUUM MACALIN CABDULLAHI AW CALI
USA-(GMN) Inaa Lilaahi Winaa Ilaahi Raajicuun, waxaan halkaan tacsi ugadiraynaa eheladii, qaraabadii iyo culumadii uu ka geeriyood Macalin Cabdullahi Ow Cali oo ku geeriyood magaalada Caabudwaaq. Waxaan leenahay Ilaahay janadii fardowso ahayd haku jazeeyo macalinka elahdiisiina samir iyo iimaan ha ka siiyo Aamiin. Waxaa tacsidaan diraya anagoo kala ah: 1- Abdulahi Sh Abdislam 2- Mahamed [...]
Buuggii ugu Wanaagsanaa ee Maahmaahda Soomaaliyeed
Muqdisho(GMN)-‘Tagto hilmaame, tubtii awowgii ka teguu ka talaxyeeyaa’. Waa murti ina baraysa in aannu horumar jirin haddii la ilaawo soo-yaalkii laga amba-qaadi lahaa. Hodontida afka iyo murtidiisuna waxay ‘aas’aas u yihiin garashada bulshada oo hadba inta uu afku xooggan yahay ayay awoodduna sarreysaa. Sidaas darteed ayuu Napoleon u lahaa “inan rageed erayga ayaan ugu talinnaa”. [...]
Gedoonline: Hambalyo Iid Mubaarak II
Muqdisho(GMN)-Maamulka Gedoonline ayaa Ummadda Soomaaliyeed ee dunidda ku nool u diray Hambalyo ku aadan Maalinta Farxadda Badan ee Iidul-Fidriga. Maamulka Gedoonline oo ka faa’ideysanaya maalinta farxada badan ayaa u rajeyey Ummadda Soomaaliyeed in sanadkan sanadkiisa ay ku gaaraan Barwaaqo iyo Nabad Galiyo. Soomaalidda ku nool dalka iyo dibadiisa ayaa isugu hambalyeynaya Maalinta Iidul-Fidriga oo ah [...]
Ururada Dhallinyarada Soomaaliyeed Oo Taageeray Musharaxnimada Cabdullahi Caddow
Mogadishu- Ururrada Dhalinyarada Soomaaliyeed daladohooda magaalada Muqodishu ayaa muujiyaya taageeradooda musharaxnimada mudanane Dr. Cabdullahi Axmed Caddow. Xubnaha iyo saraakiisha labada daladood ee ururada dhalinyarada Soomaaliyeed ee kala ah; Midnimo South and Central Youth Organization iyo Ururuka Dhalinyarada Dayax ayaa muujiyay taageerada ay u hayaan musharaxa ayagoo xaflad aad loo soo agaasimay ku qabtay Hotel Saxafi [...]
Cabdullahi Cadow oo Dhaleeceeyay Dilalka Suxfiyiinta
War Saxaafadeed, uu so saaray Musharaxa Madaxweynaha mudane Cabdullahi Axmed Cadow ayuu kaga hadlay dillalka lala beegsanayo suxufiyiinta Soomaaliyeed. Mugadishu, Somalia. August 13, 2012. Uj: Tacsi iyo Dhaleecaynta Dilalka Wariyeyaasha Ugu horeyn waxaan halkaan uga tacsiyaynayaa, eheladii, asxaabtii iyo guud ahaanba bahda warbaahinta dilalkii loo gaystay labada wariye ee Yusuf Cali Cusmaan iyo Maxamed Cali Bunayste, oo [...]
Page 1 of 142123Next ›Last »	Search in Archive